मानवबस्तीमा सञ्चालित आसफाल्ट उद्योग बन्द गराउन मेयरलाई स्थानीयहरुको दवाव - मानवबस्तीमा सञ्चालित आसफाल्ट उद्योग बन्द गराउन मेयरलाई स्थानीयहरुको दवाव
मानवबस्तीमा सञ्चालित आसफाल्ट उद्योग बन्द गराउन मेयरलाई स्थानीयहरुको दवाव
नेपालबहस संवाददाता २०७५,6फाल्गुन, 06:14:29 PM
ललितपुर । ललितपुरस्थित वागडोल मलपोखरीका स्थानीयबासीहरुले गैरकानूनी रुपमा मानवबस्तीमा सञ्चालित आसफाल्ट उद्योग बन्द गराउन चर्को दवाव दिएका छन्। उक्त उद्योगले निकाल्ने धुवाँ र ध्वनी प्रदुषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् । उक्त आसफाल्ट उधोग ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ४ मा पर्छ ।
उद्योग विभागबाट साविक किर्तिपुर गाविसमा दर्ता भएको उद्योगले ललितपुरमा उद्योग राखेको छ, यो गैरकानुनी हो ।’ बागडोलको मलपोखरीमा नेपाल आदर्श कम्पनीले आसफाल्ट प्लान्ट सञ्चालन गरेको हो । उक्त कम्पनीका सञ्चालक हरिप्रसाद पाण्डे हुन् । त्यस उद्योगले ध्वनी प्रदुषण तथा वातावरणमा समेत दुर्गन्ध फैल्याएको कार्कीले बताए ।
सोमबार १०० जना भन्दा बढी स्थानीयबासीहरुले ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई गैरकानूनी रुपमा मानवबस्तीमा सञ्चालित आसफाल्ट प्लान्ट तत्कालै बन्द गराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मेयरको कार्यकक्ष अगाडि धर्ना दिंदै उनीहरुले मलपोखरीमा सञ्चालित अबैध आसफाल्ट उद्योगका कारण मानवस्वास्थ्यमा अत्यन्तै प्रतिकुल असर परेको बताए।
बागडोल विकास सेवा समाजका अध्यक्ष राजेश कार्कीले उक्त स्थानमा सञ्चालित आसफाल्ट उद्योगका कारण मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको बताए । उनले भने, ‘मलपोखरीमा सञ्चालित आसफाल्ट उधोगका कारण हाम्रो मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पारेको छ। हस्पिटल खोल्ने भन्दै हामीलाई झुक्याएर आसफाल्ट प्लान्ट खोलियो । उद्योग विभागबाट साविक किर्तिपुर गाविसमा दर्ता भएको उद्योगले ललितपुरमा उद्योग राखेको छ, यो गैरकानुनी हो ।’ बागडोलको मलपोखरीमा नेपाल आदर्श कम्पनीले आसफाल्ट प्लान्ट सञ्चालन गरेको हो । उक्त कम्पनीका सञ्चालक हरिप्रसाद पाण्डे हुन् । त्यस उद्योगले ध्वनी प्रदुषण तथा वातावरणमा समेत दुर्गन्ध फैल्याएको कार्कीले बताए ।
वि.सं. २०५३ साल पौष ९ गते काठमाडौंमा दर्ता भएको नेपाल आदर्श कम्पनीले काठमाडौंको किर्तिपुरमा वर्कसप तथा ग्यारेज राख्नका लागि अनुमति लिएको थियो । उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा तोकिएको स्थान भन्दा अन्यत्र हुनेगरी बागडोलमा आसफाल्ट उद्योग सञ्चालन गरी कानुन उल्लंघन गरेकोमा उक्त कम्पनीलाई २०७१ माघमा मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार ५ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत गरेको थियो। उक्त कम्पनीले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरुबाट दिइएको निर्देशनसमेत अवज्ञा गर्दै आएको छ। वातावरण विभागबाट अनुगमन हुँदा गैरकानूनी रुपमा उद्योग सञ्चालन गरेको र वातावरण प्रदुषण गरेको भन्दै ५० हजार रुपैया जरिवानासमेत भएको थियो ।
मेयर महर्जनले वडा अध्यक्षको समन्वयमा महानगरपलिकाले स्थानीयबासीहरुको साथ लिएर उक्त कम्पनी मानवबस्तीमा सञ्चालन गर्न नदिने बताए। उनले भने, ‘त्यो कम्पनीको चिम्नीबाट धुवाँ आयो भने मलाई खबर गर्नुस् । म जे गर्नुपर्छ, त्यो सबै गर्छु।’ मेयर महर्जनले घुस्याहाहरुको दवाबमा गैरकानूनी काम गर्नेहरुलाई छुट नदिने बताए।
त्यस्तै ब्रम्हायणी महिला समुह बागडोलकी अध्यक्ष जयमाला ढुंगानाले आसफाल्ट प्लान्ट सञ्चालनका कारण प्रदुषण भएको, बच्चाहरु विरामी भइरहने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हावा चलेको बेला कालो धुलो आउँछ, सुकाएका लुगाहरु सबै मैला हुन्छन्, ध्वनी प्रदुषणका कारण धेरै दुःख पाएका छौं’ वागडोलकै तुलसा मगरले स्थानीय प्रहरी प्रशासनले संरक्षण गरेका कारण स्थानीयहरु समस्यामा परेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘विहान उठ्दा घाँटी दुख्ने गर्छ। बच्चाहरुमा टाउको दुख्ने समस्या छ। घरमा पस्नै मान्दैनन्।’ आफ्ना बालबालिकाहरुको स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्ने यस्तो उद्योग कुनैपनि हालतमा त्यहाँ सञ्चालन गर्न नदिने बताउँछिन् ब्रम्हायणी महिला समुह बागडोलकी रुपा दंगाल ।
आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भएका स्थानीयहरुको गुनासो सुनिसकेपछि ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले वडा नं. ४ वागडोलको मल पोखरीमा सञ्चालित अवैध आसफाल्ट प्लान्ट बन्द गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘वातावरण प्रदुषण गर्ने यस्तो उद्योग मानवबस्तीमा सञ्चालन गरेर म नगरवासीको स्थास्थ्यमा खेलवाड गर्न दिन्न।’ मेयर महर्जनले वडा अध्यक्षको समन्वयमा महानगरपलिकाले स्थानीयबासीहरुको साथ लिएर उक्त कम्पनी मानवबस्तीमा सञ्चालन गर्न नदिने बताए। उनले भने, ‘त्यो कम्पनीको चिम्नीबाट धुवाँ आयो भने मलाई खबर गर्नुस् । म जे गर्नुपर्छ, त्यो सबै गर्छु।’ मेयर महर्जनले घुस्याहाहरुको दवाबमा गैरकानूनी काम गर्नेहरुलाई छुट नदिने बताए।
मेयरको प्रतिक्रिया सुनेपछि मानववस्तीमा सञ्चालित गैरकानूनी आसफाल्ट उद्योग बन्द गराउन दवाव दिन आएका स्थानीयहरुले यथाशीघ्र उक्त उद्योग बन्द नभए कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।
२०७५,6फाल्गुन, 06:14:29 PM
ललितपुरलाई सहयोगापेक्षीमुक्त शहर बनाउन पहल
विदेशी जाँडको खोलो बग्दै, आदिवासी जनतजातिका जाँड उत्पादकलाई जेलनेल